Maqaalo – Page 3 – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
cusmaan	 May 29, 2018 0
Boqolaal qoys oo ka mid ah kuwa fatahaadda webiga jubba ay saamesay kuna sugan gobalka Jubada hoose ayaa la gaarsiiyay raashin iyo dawo xilli ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka nolosha ah. Hay’adda al ixsaan ee ka howl gasha wilaayaadka…
Dhagayso Dersiga Tobnaad ee kitaabka Az-Zuhdu War-raqaa’iq.
cusmaan	 May 28, 2018 0
Linkiga hoose ka dhagayso Dersiga Tobnaad ee kitaabka Az-Zuhdu War-raqaa'iq ee uu halkan kasoo jeediyo Sheekh Cali Katiin. Halkan ka Dhagayso Dersiga Tobnaad ee kitaabka Az-Zuhdu War-raqaa'iq.
Dhagayso Dersiga Tobnaad ee kitaabka Silatu-Raxim.
Linkiga hoose ka dhagayso Kitaabka Silatu-Raxim ee uu halkan kasoo jeediyo Sheekh Cabdul Ilaah. Halkan ka Dhagayso Dersiga Tobnaad ee kitaabka Silatu-Raxim.
cusmaan	 May 24, 2018 0
Daawo Filim Cusub : Beeraha Dalkeena Maan Ku Baahi Beelno
cusmaan	 Apr 5, 2018 0
Idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan ayaa diyaarisay barnaamij muuqaal ah oo ku saabsan horumarka ka jira magaalada Jilib iyo deegaannada hoos yimaada. Filimkan oo la daawan karo inkabadan 30 daqiiqo waxa uu si gaar ah diiradda u saaraya…
cusmaan	 Jan 13, 2018 0
Dab iyo caro, waa halkudhig lagala soo dhex baxay kitaabka munxarifka ah ee Injiil, taas oo Donald Trump uu adeegsaday hanjabaad uu jeediyay madaxweynaha kuuriyada Wuqooyi, balse maalina kuma fakarin inuu noqon doono ciwaanka buug…